စာရေးသူ Unknown အချိန် 8:26 AM No comments :
Burmese People from US demonstration to stop Civilian war in Kachin State.
Kachin, Karen, Chin, Mon, Myanmar, and Rakhine ethnic nationalities from Florida, Tennessee, Michigan, Georgia, Nebraska, New York, Pennsylvania, and Maryland participated in today's protest against Burma Army's unprovoked attack on November 19 that killed 23 cadets and wounded 20 others at KIO Officer Training School ground. Some protesters came from as far as Canada to join today's protest.
About 150 ethnic nationalities from Burma today heldaprotest in front of United Nation headquarters and the Permanent Mission of Myanmar in New York.
Pounding rains did not deter protesters from demanding UN and international community to speak for the rights of ethnic nationalities and seek justice for those fallen on November 19 at KIO Officer Training Academy.
စာရေးသူ Unknown အချိန် 11:38 PM No comments :
On Nov 19, 2014, the Burma Army launchedasurprise artillery attack on the Military Academy of the Kachin Independence Organization (KIO) near its Laiza headquarters, killing 23 officer cadets and injuring 20 cadets and trainers. The victims of this atrocious attack are from multiple ethnic groups.
The Burma Army, even in the midst of nationwide ceasefire talks, continues to engage in military maneuvers, encroaching upon KIO territory, taking control of frontline positions and fortifying them with heavy artillery. This includes shelling near IDP camps last week. These unprovoked and deliberate actions in blatant violation of the agreement reached between the government and the KIO on May 13, 2014 to de-escalate military tensions. The Kachin Alliance,anetwork of Kachin communities and organizations in the US, therefore, strongly condemns the heinous cowardly attack on Nov 19, 2014 and other violations of the agreement.
Along with the members of Kachin community in the US, we courteously invite you to join us atademonstration in New York city to show your support and lend your voices for the voiceless victims of Burma Army’s heinous acts. In solidarity with the fallen 23 cadets and thousands of innocent citizens who are suffering unjustly in Burma, we will stand together as one and demand the United Nations and the Burmese government to:
1) immediately end crime against ethnic minorities in Burma
2) give Burma Army full responsibility for the Nov. 19 killings
3) take steps to prevent further violations of agreement which can derail the peace talks including an immediate stop to continuous attacks and withdrawal of Burma Army from the frontlines
4) ensure that the Burmese government keep to its reform promises and find solutions to the decades-old ethnic conflict through political negotiations rather than military means
1) United Nations Headquarters (01:00 – 2:30pm)
2) Permanent Mission of the Union of Myanmar (3:00pm – 4:30pm)
We respectfully request all ethnic minorities, the wider Burmese society and our friends worldwide to stand in solidarity with us Kachins, as we struggle to reclaim the rights promised to us upon independence.
Please do not hesitate to contact us with any question regarding this invitation and the demonstration.
Ja Mai (215) 359 -6679 & Naw Mai Maran (402) 990- 2553
Media Contact: Gum San NSang, Phone: 1-202-500-5076
စာရေးသူ Unknown အချိန် 10:42 PM No comments :
စာရေးသူ Unknown အချိန် 10:53 PM No comments :
ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံရှိနေသေးတဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂမြေပေါ်မှာ ဝင်ရောက် ဆန္ဒပြခဲ့၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်ကျောက်တိုင်ကို အလေးပြုခဲ့၊ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းငြိမ်းချမ်းရေး အုတ်ဂူကို အလေးပြုခဲ့၊ ရွှေတိဂုံပေါ်က သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေကို အလေးပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ သပိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဂုဏ်ယူလေးစားမိပါတယ်။ ဒါဟာ အောင်ပွဲပါပဲ။ ဗကသရဲ့ အင်အား၊ ဗကသရဲ့ သတ္တိ၊ ဗကသရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ကောင်းကောင်းပြသ နိုင်ခဲ့တဲ့ အောင်ပွဲတခုပါပဲ။
အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားသပိတ်ဟာ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအနက်မှာ အလွန်ထူးခြားတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတခုဖြစ်ပါတယ်။
အခုကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာ ထူးခြားချက်နှစ်ခုတွေ့ရတယ်။ ပြောင်မြောက်တဲ့သတ္တိနဲ့ နိုင်ငံရေးရင့်ကျက်မှု။
ဗမာနိုင်ငံကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာထူးခြားတယ်။ တခြားနိုင်ငံကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့မတူဘဲ ဗမာ့လက္ခဏာဆောင်တဲ့ သီးခြားထူးခြားမှုရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ တိုင်းပြည်တပြည်လုံးရဲ့ နိုင်ငံရေးကို အမြဲလိုလို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့အချက်ပဲ။ ဒီတပွဲမှာလည်း အစဉ်အလာမပျက်တဲ့ အဲဒီဂုဏ်ကိုတွေ့ရတယ်။ အခုကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာ အများယောင်လို့ယောင်ပြီး နောက်ကလိုက်အော်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာဒါမျိုး၊ တိုက်ပွဲဆိုတာဒါမျိုးလို့ ပြလိုက်တဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြလှုပ်ရှားမှု တရပ်ပဲ။
အခုသပိတ်နဲ့ အတူဆန္ဒပြတဲ့လုပ်ရပ်လည်း ပူးတွဲပါဝင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆန္ဒပြပွဲဟာ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီး ဆန္ဒပြတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာထူးခြားချက်ပဲ။ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြလုပ်ရပ်လည်း ဖြစ်တယ်။ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးကွလို့ သင်ပြပေးတာလည်း ဖြစ်တယ်။ ဆန္ဒပြဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းရင် လူဘယ်နှယောက်ပြပါမယ်ဆိုတာ ခွင့်တောင်းရတယ်။ ဘာကြွေးကြော်သံတင်ပါမယ်ဆိုတာ ခွင့်တောင်းရတယ်။ ဘာဆိုင်းဘုတ်ထူပါ့မယ်ဆိုတာ ခွင့်တောင်းရတယ်။ ဘယ်နေရာမှာပြပါ့မယ်ဆိုတာ ခွင့်တောင်းရတယ်။ ဘယ်သူတွေတာဝန်ယူပါ့မယ်၊ မကျေနပ်ရင် ဒီလူတွေကို အရေးယူပါဆိုပြီးစာရင်းတင်ရတယ်။ ဒါတွေဟာ ဆန္ဒမပြခင်မှာကတည်းက လွတ်လပ်မှုတွေ စတင်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် ဆန္ဒပြသူတွေကို ရန်သူလို သဘောထားတဲ့ အစိုးရနဲ့ ရဲဆီကို ကြိုတင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့သေနင်္ဂဗျူဟာတွေ ၊ ရည်မှန်းချက်တွေကို တင်ပြ အစီရင်ခံရတာလည်း ဖြစ်တယ်။ အဲသလို လုပ်ရပ်တွေဟာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့တဲ့ ချုပ်ချယ်မှုတွေဖြစ်တယ်၊ ကိုယ့်လွတ်လပ်မှုကိုယ် ချုပ်နှောင်ပြီး အာဏာပိုင်တွေဆီမှာ အညံ့ခံတာဖြစ်တယ်။ အဲသလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်လှုပ်ရှားမှုကို အားနည်းပျော့ညံ့စေတယ်ဆိုတာကို အခုလှုပ်ရှားမှုကထောက်ပြရာရောက်တယ်။ အဲသလို ကြိုတင်အစီရင်ခံတာတွေမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာ လွတ်လပ်ပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုအပြည့်ရှိနေတာ၊ တက်ကြွဖျတ်လပ်နေတာကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်။ ဒါဟာတခြားဆန္ဒပြသူတွေ သင်ခန်းစာယူကြရမယ့် အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ရန်မပြုဘူး။ ဘယ်အဆောက်အဦးကိုမှ မဖျက်ဆီးဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မခြိမ်းခြောက်ဘူး။ ဘာလက်နက်မှကိုင်ဆောင်မထားဘူး။ ဘာဥပဒေမှ မချိုးဖောက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေမှန်သမျှလိုက်နာပါ့မယ်၊ စည်းကမ်းမှန်သမျှ လိုက်နာပါ့မယ်၊ ထုတ်ချင်တဲ့ စည်းကမ်းထုတ်ပါ လိုက်နာဖို့အသင့်ပါ ဆိုတဲ့ အညံ့ခံစိတ်ဓါတ်မျိုးကို ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ မတွေ့ရဘူး။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းဝင်ရောက်မယ့်အချိန်မှာ အဲဒီသဘောထားကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့ရတယ်။ တက္ကသိုလ်ထဲကို ဝင်ခွင့်ပြုဖို့ ကျောင်းသားတွေက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေဆီ ခွင့်တောင်းတယ်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂရင်ပြင်ထဲကိုဝင်ဖို့ ဗိုလ်အောင်ကျော်ကျောက်တိုင်ကို အလေးပြုဖို့ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြတယ်။ အလေးပြုပြီးရင် ပြန်ထွက်မယ် ဆိုတာကိုလည်း ရှင်းပြတယ်။ အာဏာပိုင်တွေဘက်က ခွင့်မပြုဘူး။ ကျောင်းသားကို ကျောင်းထဲ ဝင်ခွင့်မပေးဘူး။ ဒါဟာမတရားတဲ့ချုပ်ချယ်မှုပဲ။ အဲဒီမတရားမှုကို ကျောင်းသားတွေ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ခဲ့သလဲ။ အတားအဆီးကိုကျော်ပြီး ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာကို ရောက်အောင်သွားခဲ့တယ်။ အဖြေဟာ အလွန်ရှင်းလင်း ပြတ်သားပါတယ်။ ဒါဟာသတ္တိပြောင်မြောက်မှုကို ပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်။ လူငယ်ပီသမှုကို ပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒါတွင်မက အတွေးအခေါ်လွတ်လပ်မှုကို ပြသတာ လည်း ဖြစ်တယ်။ ဖိနှိပ်သူပြဋ္ဌာန်းတဲ့ စည်းကမ်းမှန်သမျှ လိုက်နာရမယ်၊ အဲသလို လိုက်နာမှဒီမိုကရေစီသမားလို့ အာဏာပိုင်တွေ ရိုက်သွင်းထားတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးတွေ သူတို့ခေါင်းထဲမှာ ကိန်းအောင်းမနေတာကို ဒီလုပ်ရပ်က ပြတယ်။
အခုကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို လူထုအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက ထောက်ခံမှုပြခဲ့တယ်။ သမဂ္ဂတွေ၊ ကွန်ယက်တွေ၊ လယ်သမား၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေသာမက တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကပါ ထောက်ခံမှုပြသခဲ့ကြတယ်။ ဒီအချက်ဟာ ဘာကို ဖော်ပြပါသလဲ။ ကျောင်းသားတွေ ကို ထောက်ခံမှုပြသတာဖြစ်ရုံသာမက လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကို အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး အလွှာအသီးသီးက စိတ်ပျက်နေကြပြီဆိုတာကိုပါ ဖော်ပြတာလည်း ဖြစ်တယ်။ ပြတ်သားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်၊ ရဲဝံ့တဲ့လုပ်ဆောင် ချက်ကို လိုလားနေကြတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်တဲ့ စစ်အာဏာရှင် အဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို လူတွေမကြိုက်ကြဘူးဆိုတာ ဖော်ပြတာဖြစ်သလို အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ မဝံ့မရဲ လုပ်ရပ်၊ မပြတ်မသားလုပ်ရပ်တွေကို ငြီးငွေ့စိတ်ပျက်နေသူတွေ တော်တော်များနေပြီဆိုတာကို ဖော်ပြတဲ့ လက္ခဏာတွေလို့လည်း ဆိုချင်တယ်။ ဒါဟာဦးသိန်းစိန်ရော၊ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေပါ သတိပြုရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ငါတို့ကို လူတွေ မကြိုက်တာ ဘာ့ကြောင့်လဲ။ ငါတို့ဘာတွေ ပြုပြင်သင့်သလဲဆိုတာကို သိပ်နောက်မကျသေးခင်မှာ စဉ်းစားဖို့ အခွင့်အရေးရတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ပြင်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင် ပြင်ဖို့အခွင့်အရေးရတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ အခုကျောင်းသား တွေရဲ့ လှုပ်ရှားတောင်းဆိုမှုတွေကို မလိုက်လျောရင် ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာ ကျယ်ပြန့်ကြီးထွားလာလိမ့်မယ်။ လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးပါဝင်တဲ့ တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုကြီး ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
မနေ့က နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ တိုက်ပွဲဗျူဟာ ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ထွက်လာတယ်။ အစိုးရကိုပေးတဲ့ ရာဇသံနဲ့အတူ ထွက်လာတာပါ။ ဒီလိုထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူမှ မျှော်လင့် မထားခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒါဟာ အစီအစဉ်ရှိမှုနဲ့၊ နိုင်ငံရေး ရင့်ကျက်မှုကို တစုံတရာဖော်ပြတယ်လို့ ထင်တယ်။ နည်းပရိယာယ်ဆိုတာ တသမတ်တည်း သွားဖို့မလိုအပ်ဘူး။ ပုံသေမထားအပ်ဘူး။ ပြောင်းသင့်ရင် ပြောင်းရမယ်။ ပြောင်းနိုင်စွမ်း၊ ပြုပြင်နိုင်စွမ်း ရှိရမယ်။ flexible ဖြစ်ရမယ်။ ရည်မှန်းချက်ကို တချီတည်းနဲ့အပြတ်ရတဲ့အခါလည်း ရှိနိုင်သလို၊ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရတာ မျိုးလည်း ရှိချင်ရှိနိုင်တယ်။ ဒီလို အမြင်မျိုးဟာ တိုက်ပွဲအရှိန်တက်နေချိန်မှာ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ရဲဘော်တွေကို ရှင်းပြဖို့သိပ်ခက်တယ်။ တိုက်ပွဲ အရှိန်တက်နေချိန်မှာ ရှေ့တိုးချင်တဲ့စိတ်ဓါတ်ကသာ အားလုံးကို ဦးဆောင်နေတတ်တယ်။ သေသေကြေကြေ အနာခံတိုက်ဖို့သာ စိတ်အားထက်သန်တယ်။ အဲသလို အချိန်မျိုးမှာ နည်းပရိယာယ်ပြင်ဆင်ကစားနိုင်တာဟာ နိုင်ငံရေးရင့်ကျက်မှုကို ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်နိုင်မှုကို ဖော်ပြတာဖြစ်သလို၊ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု ရှိတယ်ဆိုတာကို တွေ့မြင်ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကို နောက်ကလူတွေက ယုံကြည်လိုက်နာတယ် ဆိုတာဟာလည်း အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးရဲ့ ရင့်ကျက်မှုကိုပြသတယ်။ ခေါင်းဆောင်မှုကို တန်ဖိုးထားတတ်တာ၊ ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ တန်ဖိုးကိုသိတာဟာ အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ရင့်ကျက်မှု အဖွဲ့အစည်းရဲ့ နိုင်ငံရေးရင့်ကျက်မှုကို ပြသတာဖြစ်တယ်။ အများဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်ခံတာ ကွဲလွဲမှုကို လက်ခံတာကလည်း နိုင်ငံရေးရင့်ကျက်မှုကို ပြသပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုတိုက်ပွဲဟာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အားနည်းတယ်လို့တော့ထင်တယ်။ ထဲထဲဝင်ဝင် မသိရတဲ့အတွက် အပိုင်တော့ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိရင် ဒီ့ထက်အားကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ယူဆစရာအချက်တချို့ကို တွေ့မြင်ရတယ်။ ဒါ့အပြင် အောက်ခြေကျောင်းသားထုပါဝင်မှုအားနည်းတယ်။ ဗကသရဲ့ စည်းရုံးရေးအင်အားအရဆိုရင် ဆန္ဒပြရာမှာ ပါဝင်တဲ့ ကျောင်းသားအရေအတွက်ဟာ ဒီ့ထက်များသင့်တယ်။ အခုများသင့်သလောက် မများဘူး။ ဒါလည်းအကြောင်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျောင်းသားဆိုတဲ့အလွှာဟာ ထူးခြားချက်ရှိတယ်။ ကျောင်းသားဟာ အာဏာရရေး ရည်မှန်းချက်မရှိဘူး။ အခုလှုပ်ရှားနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ဖို့ လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ လွှတ်တော်အမတ်မဖြစ်ရမှာ ကြောက်လို့ မပြောရဲ မဆိုရဲတဲ့သတ္တိကြောင်မှုမျိုးမရှိဘူး။ လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်နေလို့ မပြောရဲ မဆိုရဲဖြစ်နေတဲ့ သတ္တိကြောင်မှုမျိုးလည်း မရှိဘူး။ နောက်ထပ်ထူးခြားချက်ကတော့ ကျောင်းသားဟာ နိုင်ငံတကာပေးစာကမ်းစာကို မမျှော်ကိုးဘူး။ ဒိုနာအကြိုက်လိုက်လျောဆောင်ရွက်ရတာ မျိုး မရှိဘူး။ အလှူငွေများများရပါစေတော့ဆိုပြီး ဒိုနာမကြိုက်တာမပြောဝံ့၊ ဒိုနာကြိုက်ပါစေတော့ဆိုပြီး ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်ပြောရတာမျိုးမရှိဘူး။ ဒါဟာ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ထူးခြားချက်ပါ။ အာဏာမမက်၊ ငွေမမက်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြတဲ့အတွက် သူတို့နိုင်ငံရေးကို လူအများကပိုမို ယုံကြည်မှုရှိကြတယ်။ ဒီနေ့ဗမာပြည်မှာ ထောက်ပံ့ကြေးမယူတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ အလွန်ရှားတယ်။ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်ဟာ အဲသလို ရှာမှရှားတဲ့အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသလိုအဖွဲ့မျိုးဟာ ဗကသတခုတည်းပဲရှိတာတောင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ငွေမရှိရင် ဘာမှ လုပ်လို့မရတာဟာ လက်တွေ့ပဲ၊ အမှန်တရားပဲလို့ ဆင်ခြေပေးပြီး ပေးစာကမ်းစာ လက်ဖြန့်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများဟာ ဗကသရဲ့ အခုသပိတ်ကိုကြည့်ပြီး ရှက်တတ်ဖို့ကောင်းတယ်။
(ဗမာနိုင်ငံဆိုတာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ တနိုင်ငံလုံးကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဆိုတာပြည်မ၊ ဗမာဆိုတာ တနိုင်ငံလုံးကို ခေါ်တဲ့ ဗကသ မူအတိုင်းသုံးနှုန်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
စာရေးသူ Unknown အချိန် 10:57 PM No comments :
ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ထုတ် The Economist မဂ္ဂဇင်းကြီးက ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ထားတာပါ... မျက်မှန်တစ်လက်တည်း တတ်ကြည့်မယ့်အစား၊ မျက်မှန်ပေါင်းစုံတတ်ကြည့်ရင်း စုံစုံလင်လင် မြင်နိုင်စေလို့တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ဖြစ်ပါတယ်... ဆောင်းပါးပါ အချက်အလက်တွေဟာ မူရင်းရေးသားသူရဲ့ အာဘော်ပါ... ကျွန်တော့်အာဘော် မဟုတ်ပါဘူး... ဘာသာပြန်ရာမှာ အမှားအယွင်းရှိတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်အပြစ်ပါပဲ... ဝေဖန်ချက်များလည်း အောက်မှာ ရေးသွားနိုင်ကြပါတယ်... မောင် G...
နှေးကွေးနေဦးမည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ : ရှုပ်ထွေးရှည်လျားနေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သမ္မတဖြစ်ခွင့်လမ်းကြောင်း
စစ်တပ်က လွှမ်းမိုးထားတဲ့ အစိုးရဟာ ၂၀၁၁ မှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရဲ့အထင်ရှားဆုံးသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဟာ လာမယ့်နှစ်မှာ သမ္မတဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာ မပြီးပြတ်နိုင်သေးတဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ မေးခွန်းကြီး ဖြစ် လို့နေပါတယ်။ နိုဘယ်ဆုရှင်၊ ကမ္ဘာပေါ်က အထင်ရှားဆုံး အမျိုးသမီးတွေထဲကတစ်ဦး၊ နိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံး အတိုက်အခံပါတီဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖို့ မြန်မာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကသာ ဆက်ပြီး သူ့ကို သမ္မတဖြစ်နိုင်ခွင့်ကနေ တားဆီးထားမယ်ဆိုရင် ဒီဂုဏ်ပုဒ်တွေဟာ ဘာမှမဟုတ်တော့သလိုပါပဲ။ နိုင်ငံကို ပြန်လည်ထူ ထောင်မယ့်သူတွေအဖို့ ဒီအခြေခံဥပဒေကို ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဟာ အရေးအပါဆုံးသော စမ်းသပ်ချက် ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ လက်ရှိအနေအ ထားတွေကို သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်နိုင်ရေးဟာ ထင်ထားတာထက် ပိုခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
ဒီပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်က ၅၉(စ)ပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ စစ်တပ်ဘက်က အခြေခံဥပဒေသစ်ကို ရေးဆွဲစဉ်က သူတို့အကြောက်ရဆုံး အတိုက်အခံ ရဲ့ နိုင်ငံရေးလိုအင်ဆန္ဒတွေကို တားဆီးပိတ်ဆို့နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ရင်း သူ့ကိုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီပုဒ်မမှာ အဓိကအတားအ ဆီးက နိုင်ငံခြားသား အိမ်ထောင်ဖက်၊ သားသမီးရှိသူ ဘယ်သူ့ကိုမဆို သမ္မတမဖြစ်နိုင်အောင် တားဆီးထားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ရဲ့ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ခင်ပွန်းသည် မိုက်ကယ်အားရစ်ဟာ ဗြိတိသျှလူမျိုး တက္ကသိုလ်ဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ သူ့သားနှစ် ယောက်ဟာလည်း ဗြိတိန်မှာ မွေးဖွားပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံသား နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆာင်ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်စုကြည်ကို ၂၀၁၀ နှောင်းပိုင်းမှာ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး သူက ၂၀၁၂ ဧပြီမှာ ကျင်းပတဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အပြတ်အသတ်ကို အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ရွေး ကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်သစ် ၄၃ ယောက်ထဲမှာ တစ်ဦးအပါအဝင်အဖြစ် လွှတ်တော်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ အကုန်လောက်မှာ ကျင်းပ မယ့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ဖို့အတွက်လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ၂၀၁၅ မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက သမ္မတကို ရွေးချယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့သာ ပြဿနာမရှိဘူးဆိုရင် အသစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရမယ့် NLD ရဲ့ ဥပဒေပြုအမတ်တွေဟာ ဒေါ်စုကြည်ကို သမ္မတအဖြစ် တင်မြှောက်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။
စစ်တပ်က ရေးခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ဥပမာ၊ ဗမာလူမျိုးတွေ အများစုဖြစ်နေတဲ့ ဗဟိုအစိုးရကို ဆယ်စုနှစ်များ စွာ တိုက်ခိုက်တော်လှန်နေတဲ့ ကရင်နဲ့ကချင်လို တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေအတွက် နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်နိုင်ခွင့်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ထည့် သွင်းထားခြင်းမရှိပါဘူး။ စစ်တပ်ရဲ့ ရုပ်သေးရုပ်ပါတီဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ ပါတီဝင်တွေကနေစလို့ NLD က လူတွေဆုံး အားလုံးလိုလိုလောက်ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကိုတော့ မကျေမနပ်ဖြစ်နေရတာတွေ ရှိနေကြပါ တယ်။
အခုအချိန်အထိကိုပဲ၊ ယေဘုယျအနေနဲ့ လက်ခံနိုင်တာက ကြံခိုင်ရေးပါတီရဲ့ အမာခံတစ်ချို့ကိုယ်နှိုက်က တကယ်လို့သာ မြန်မာရဲ့နိုင်ငံ ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာ စစ်မှန်တယ်ဆိုတာကို ပြချင်ရင် ၅၉(စ) ကို ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်မယ်လို့ ယူဆနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လပေါင်း များစွာ ချင့်ချိန်တွက်ချက်ပြီးလို့ ဇန်နဝါရီ ၃၁ မှာတော့ အမတ် ၁၀၉ ယောက်ပါဝင်တဲ့ လွှတ်တော်ကော်မတီဟာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြံဥာဏ်တွေကို စုစည်းပြီး အစီရင်ခံစာတစ်စောင် တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအစီရင်ခံစာမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား အများ စုဟာ ပြင်ဆင်ရေးကို မလိုလားကြဘူးလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီကော်မတီမှာ ပါဝင်သူ အများစုဟာ ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ်အများစုပါ။ သူတို့ဆီ ကို ပြည်သူတွေဆီကနေ စာပေါင်း ၂ သောင်း ၈ ထောင်လောက်ရောက်လာပြီး စာတွေမှာ ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြံ ဥာဏ်တွေကို ရေးသားပေးပို့ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လူတစ်သိန်းလောက်က လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ စာမှာတော့ ၅၉ (စ) အပါအဝင် တပ် မတော်သား ၂၅ % ကို လွှတ်တော်မှာ ဆက်လက်ထားရှိရေးကို ထောက်ခံကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ၅၉၂ စောင်ကပဲ ဒီပုဒ် မကို ဖယ်ရှားဖို့ အဆိုပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
NLD ဘက်ကလည်း ခပ်မြန်မြန်ပဲ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဇော်မြင့်မောင်ကတော့၊ ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးမှုကန် ပိန်းဟာ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေကြားထဲမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လူထုအမြင်ကို ကိုယ်စားပြုမှုမရှိဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူ ပြောတာမှန်တယ်ဆိုဦးတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ဒေါ်စုကြည်ရဲ့ သမ္မတဖြစ်ခွင့်ကို လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိဘူး ဆိုတာကို မြင်နေရပါတယ်။
ဒီမှာလည်း မကျေလည်မှုတွေ ရှိနေပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးရဲ့အမြင်ထက် လူထုရဲ့အတွေးကို ပိုပြီးဦးစားပေးခဲ့ပုံ ရှိပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းက ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ သမ္မတဖြစ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့အမြင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဒေါ်စုကြည်ကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ ဒီပုဒ်မကို ပြောင်းလဲပေးရေး ထောက်ခံမှုဟာ သတင်းခေါင်းကြီးတွေတိုင်းမှာ နေရာယူခဲ့ပြီး၊ သူ့ရဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ ပြု ပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားဆိုတဲ့ ပုံရိပ်ကို ပိုအားကောင်းအောင် ဖြည့်တင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာ လူတွေသိပ်သတိမ ထားမိတဲ့အချက်ပါလာပါတယ်။ “တကယ်လို့ လူထုရဲ့နိုင်ငံရေးလိုအင်ဆန္ဒတွေဟာ လက်ရှိနိုင်ငံရေးစနစ်က ဖြည့်စည်းနိုင်တာထက် ပိုမို ကျယ်ဝန်းလာမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအကျပ်ရိုက်မှုတွေနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အဆုံးသပ်သွားပါလိမ့်မယ်။” တကယ်လို့ အဲဒီလိုဖြစ်လာရင် တော့ “ဒီနေ့အထိ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအရ လွတ်လပ်မှုတွေကို လက်လွှတ်ရမှာပါ။ ဒီအတွက် အားလုံးကို မှာကြား ချင်တာက ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို ဂရုတစိုက်အမြော်အမြင်ရှိရှိ ကိုင်တွယ်ကြဖို့ပါပဲ”လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဂရုတစိုက် အမြော်အမြင်ရှိရှိဆိုတာမျိုးကို လက်တွေ့လုပ်နိုင်ဖို့က ရှည်လျားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးပါ။ အသက် ၆၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုကြည် အတွက် ဒီအချိန်ကို စောင့်နိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ လွှတ်တော်ကော်မတီက တင်ခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ လူထုသဘောထား အနည်းငယ်ပဲ ပါဝင် ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ ဒီလိုအကြံပြုချက်မျိုး ထောင်သောင်းကို အမှန်တကယ်လေ့လာနိုင်မယ့် ကော်မတီတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းပြီးပါပြီ။ ဒါကအချိန်ယူမှာပါ။ အများသဘောညီ ခိုင်မာတဲ့ အဆိုပြုချက်တွေ ပေါင်းစည်းမိသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲ၊ အတားအဆီးအနေနဲ့ ၇၅% သော အမတ်တွေရဲ့ သဘောတူညီချက်ကို ယူရဖို့ကရှိနေဦးမှာပါ။ အခုအချိန်မှာ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ်တွေ က လွှတ်တော်ရဲ့ ၈၀% ကို ယူထားပါတယ်။ ဒေါ်စုကြည်နဲ့ သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေအဖို့ ခရီးကြမ်းကြီးက ရှေ့မှာစောင့်နေမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။
စာရေးသူ Unknown အချိန် 9:10 PM No comments :
တံဆိပ်များ ဆောင်းပါး , နိုင်ငံရေးနှင့်သမိုင်းများ
ယခုဆောင်းပါဟာHBR(Harvard Business Review)Case Studyဖြစ်ပါတယ်။HBR Case တွေဟာ Fictional ပါ။ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာ ကြုံရတတ်တဲ့အကျပ်အတည်း (Dilemmas)တွေကိုနမူနာယူတည်ဆောက်ထားပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေအနေနဲ့ အဖြေလွှာတွေ၊ ခန့်မှန်းချက် တွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ “ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ နမူနာ ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါ့ မယ်။ ပြီးတော့မှ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို ပြန်လည်တင်ပြပါမယ်။
Ed Davidson ကDavosကိုရောက်နေတယ်။ အဲဒီမှာတင် သူ့စီအီးအိုကသူ့ကိုဥက္ကဋ္ဌရာထူးအတွက် အမည်မတင် သွင်းပေးဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်ရတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ Edရဲ့လက်ထဲမှာကစီအီးအိုရဲ့ဂုဏ် သတင်းကိုမှေးမှိန်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ မသမာတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကလည်း ကိုင်ထားတယ်။ ဆိုတော့ သူ့အလုပ်အတွက် ဒီအချက် ကိုအသုံးချလိုက်သင့်သလား။ ဒါကဒီနမူနာ ဖြစ်စဉ် အတွက် မေးခွန်းပေါ့လေ။
Myanmar B2B Management Magazine, November 2014
စာရေးသူ Unknown အချိန် 9:00 PM No comments :
ဒီစာအုပ်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ နာမည်ပေးထားပါတယ်... "ကျွန်မနာမည်နူဂျုဒ်ပါ..." ဆိုပြီးတော့ပါ... စာအုပ်နာမည်က ရိုးရှင်းသလောက် စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်လမ်းက မရိုးရှင်းပါဘူး... ဇာတ်လမ်းက တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးပါ... ယီမင်နိုင်ငံက အသက် ၁၀ နှစ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို အဖေလုပ်တဲ့သူက သူ့ထက်အသက်သုံးဆလောက် ပိုကြီးတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ အတင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားစေခဲ့ပါတယ်... အဲဒီကလေးမလေးက သူ့ယောက်ျားနဲ့ ကွာရှင်းခွင့်ရဖို့အတွက် တရားရုံးမှာ အကျိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ အကြောင်းကို ရေးထားတာပါ... ဒီစာအုပ်မှာ လူကိုလူချင်း ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေ၊ ဘာသာရေးအရေခြုံပြီး လူမဆန်စွာ ပြုမူတာတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရအောင် ဖော်ပြထားပါတယ်...
ဒီနူဂျုဒ်ဆိုတဲ့ ကလေးမနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်း ဟီလာရီကလင်တန် ပြောခဲ့တဲ့ စကားကို ဒီနေရာမှာ ရေးပြချင်တယ်...
"သူ(နူဂျုဒ်)က ကျွန်မမြင်ဖူးတဲ့ အကြီးမြတ်ဆုံးသော အမျိုးသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ... သူကသူ့ရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါပြီ"
လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်၊ လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းလည်းဖြစ်၊ သမ္မတဟောင်းကတော်လည်းဖြစ်တဲ့ မစ္စကလင်တန်က ချီးကျူးခဲ့ဖူးပါတယ်...
နူဂျုဒ်ဟာ Glamour အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းကြီးရဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် Women of the Year ဆုရှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာပြန်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီစာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သိပ်အများကြီး မပြောချင်ပါဘူး... သုံးခုတည်း ပြောပါမယ်... သုံးခုတည်းပါ အများကြီး မဟုတ်ပါဘူး...
နံပါတ် ၁ ... ကျွန်တော် ဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်ကို ကိုင်ပြီးတော့ သူများဘာသာကို မပုတ်ခတ်ပါနဲ့... အဲဒီလို လက်သီးပုန်းထိုးတဲ့ အလုပ်မျိုးကို ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး... ကျွန်တော်က ဘယ်တော့မဆို လူတိုင်းလူတိုင်း ဘာသာလူမျိုးမခွဲပဲ... တစ်ဦးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို တစ်ဦးက မဖျက်ဆီးပဲ... ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရှိကြတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို မျှော်လင့်နေသူပါ... ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ ဘုံဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားဆိုလို့ တစ်ခုတည်း ရှိပါတယ်... အဲဒါငြိမ်းချမ်းရေးပါပဲ...
နံပါတ် ၂ ... ဒီကမ္ဘာကြီးကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ အန္တရာယ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်... စာဖတ်တဲ့သူဟာ သိပ္ပံပညာ၊ (အထူးသဖြင့် အာကာသသိပ္ပံ၊ ရူပဗေဒနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံတွေ)ကို လေ့လာလိုက်စားသူဆိုရင် စက္ကန့်ပိုင်းလောက်အတွင်းကို ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရစရာမရှိအောင် ပျက်ဆီးသွားနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် လူသားမျိုးနွယ်စုဟာ ဒိုင်နိုဆောတွေလို မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သိထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း ကြောက်စရာဖျက်စီးမှုက လူကိုလူချင်း ညှင်းပန်းနှိပ်စက်လိုစိတ်ကနေလာပါတယ်... ဒီအချက်လောက် မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ များများစားစား လူသားမျိုးနွယ်ကို ထိခိုက်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရင်း ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ မပေါ်ဖူးသေးပါဘူး။ ဒီလိုလူလူချင်း ညှင်းပန်းနှိပ်စက်လိုတဲ့စိတ်ကို ကိုယ့်စိတ်မှာဖြစ်မလာအောင်... အဲဒီလိုစိတ်မျိုးရှိသူတွေရဲ့ အပြုအမူတွေက... ကျန်တဲ့သူတွေကို ထိခိုက်မသွားရအောင်... တားဆီးဖို့... ကာကွယ်ဖို့နဲ့... အသိပညာပေးဖို့ဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေရဲ့ မွေးရာပါ တာဝန်ပါ...
နံပါတ် ၃ နဲ့ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့... ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်မိလို့ သဘောကျတယ်ဆိုရင်၊ ကြိုက်တယ်၊ နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကိုလည်း ဖတ်ခွင့်ရှိအောင် မျှဝေပေးဖို့ပါ... ဒီလိုမျိုး လက်ဆင့်ကမ်းပေးတာက ကျွန်တော့်ကို အကောင်းဆုံး ကူညီတာပါပဲ။ ကျွန်တော်က ဒီလို သုတစာပေ၊ ရသစာပေတွေကို ဘာသာပြန်တာရော၊ ပင်ကိုယ်ရေးအနေနဲ့ပါ ရေးသားရင်း ထမင်းစားသွားဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်... ဒီအလုပ်ကိုပဲ professional ဖြစ်တဲ့အထိ လုပ်သွားမှာပါ... ဒီစာအုပ်ကိုလည်း ကျွန်တော်ရောင်းတန်းဝင် ပုံနှိပ်စာအုပ် ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားသွားမှာပါ... ကျွန်တော့်မှာလည်း ကျွန်တော့်စား၊ ဝတ်၊ နေရေးအတွက် ပိုက်ဆံလိုပါတယ်... အဲဒါကြောင့် ဒီမှာ Digital Version နဲ့ ဖတ်ပြီးသွားပေမယ့် စာအုပ်ထွက်လာရင်လည်း ဝယ်ဖတ်ပေးကြပါ... တကယ်လို့ ဒီစာအုပ်ကို ထုတ်ဝေချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်နဲ့ လာဆက်သွယ်ပေးကြပါ...
သူ့ မူရင်းစာအုပ်ရဲ့ ကာဗာပါ...
ဒီပုံကတော့ ယီမင်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသွားတုန်းက နူဂျုဒ်ရယ်၊ သူ့ရှေ့နေရယ်နဲ့ တွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံပါ...
ဒီစာအုပ်ကို စာအုပ်နာမည်ကြောင့် စိတ်ဝင်စားသွားတာပါ... ဖတ်နေရင်းနဲ့ ငါတော့ ဒီစာအုပ်ကို ဘာသာပြန်မှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိလာပါတယ်... ဒီလိုနဲ့ ရေးလက်စ စာမူတွေ ဘေးချပြီး ဒီစာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ဖြစ်ပါတယ်... စာအုပ်ကို အစအဆုံး တစ်ခေါက်ဖတ်ပြီးတော့ စပြီးဘာသာပြန်ပါတယ်... ပြန်နေရင်းကိုပဲ စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေ ဖတ်မိရင်း လူကဒေါသထွက်လာတယ်... နောက်တော့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်ရတယ်... ဒီစာအုပ်မျိုးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကိုယ်စား ကျွန်တော်တို့ကို မေးခွန်းတစ်ခုမေးနေတာပါ... ကျွန်တော်တို့တတွေ အခုတည်ဆောက်နေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ တကယ်ပဲ ယဉ်ကျေးတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းလား၊ ဒါမှမဟုတ် တောထဲတောင်ထဲကလို နိုင်ရာစား၊ အားကြီးသူက အားနည်းသူကို အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ... ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်မျိုးဆက်ကို ဒီမေးခွန်းအတွက် အဖြေပေးတဲ့အခါမှာ ကောင်းမွန်တဲ့အဖြေမျိုး ပေးနိုင်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်...
ဪ... မေ့သွားတယ်ပြောမလို့... ကျွန်တော်က ပြီးချင်ဇောနဲ့ အလောသုံးဆယ် လုပ်လိုက်မိလို့၊ PDF ထုတ်တဲ့အခါမှာ စာမျက်နှာ၊ အခန်းစဉ်၊ စီတာမှန်၊ မှန်လောက်ပဲ စစ်နိုင်လိုက်တယ်... စာလုံးသတ်ပုံမှားတာ၊ ဘာညာ စသဖြင့် အမှားအယွင်း တစ်ခုခု ဖတ်ရင်းနဲ့ တွေ့ခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ကို ပြန်အကြောင်းကြားပေးကြပါဦး... ဖတ်ပြီးရင်လည်း ဝေဖန်ချက်... လေကန်ချက်လေးတွေ ပေးဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့...
ဒါပေမယ့် အဓိကအကျဆုံး bottom line ကတော့ စာအုပ်အနေနဲ့ ထွက်လာရင်လည်း ဝယ်ဖတ်ပေးကြဖို့ပါပဲ... ခိခိ...
အားလုံးပဲ စာအုပ်ကို ဒီ Link မှာ ဖတ်နိုင်ကြပါပြီ...
စာရေးသူ Unknown အချိန် 8:39 PM No comments :
တံဆိပ်များ စာအုပ်များ , နိုင်ငံရေးနှင့်သမိုင်းများ
တိုင်းတပါးကျွန်၊ စစ်တပ်ကျွန်၊ ခရိုနီကျွန်
ငါတို့ က ခေါင်းဆောင်လုပ်မှာ
ငါတို့ပညာရေး ကို မချုပ်ချယ်နဲ့
စာရေးသူ Unknown အချိန် 8:36 PM No comments :
တံဆိပ်များ ကဗျာ , နိုင်ငံရေးနှင့်သမိုင်းများ